कुवेतमा NRNA को रेडिमेड भाषण र फेसबुके पत्रकार — Hamro Sanchar
केही दिनपहिला कुवेतमा सम्पन्न एक कार्यक्रम समारोहमा विशेष अतिथिको आषणग्रहण गर्दै एनआरएनए एनसिसि कुवेतले लामो समय पछि समाजमा फेरि आफ्नो उपस्थिति जनायो । भूमिगत जस्तै भएको एनसिसिले यसरि आन्तरिक रुपमै संस्थालाई जागरुक गराउदै नेतृत्वको हेरफेर गरि एक्कासी समाजमा सार्बजनिक हुदा कार्यक्रममै धेरैले कानेखुसि गरे । जतिलाई चासो थियो नवगठित समिति बारे जान्न चाहे । चासो नलिनेहरुलाई मतलब हुने कुरा भएन । हुनत कुवेतमा विगतदेखि नै ब्यापार बिजनेसमा पहुच भएका र केही उच्च ओहोदामा रहेका बाहेक आमश्रमिकहरुको नजरमा कहिल्यै पर्न सकेन एनसिसि । स्थापना कालदेखि नै सस्थाले गरेका सामाजीक कार्यहरु भन्दा नि चुनाव सगै हुने गतिबिधीहरुले चर्चामा आउने गर्छ कुवेत एनसिसि ।
एनसिसि कुवेतलाई धेरैले नेतृत्व दिए, आफ्नो गक्ष अनुसारको कार्य समेत गरे, पत्रकार महासंघमा पनि धेरै आबद्द भए र छोडे पनि । आउने जाने क्रम जारी नै रहन्छ । किनभने यहा न त कोहि केवल नितान्त एनसिसि हाक्न आएको नत पत्रकारिता गर्न नै। हो हामी यहा श्रम गर्न आएको हो । तर श्रम गरि बचेको समयलाइ नै केही बौद्धिक ब्यक्तिहरुले सामाजिक कार्यहरु गर्ने क्रममा समयको माग सगै सबै स्थापना भएका हुन ।
हिलो छ्यापेर हैन, सवै मिलेर काम गरौं
उद्देश्य समाजसेवा ! काम गाना, बजाना अनि खाना !
कहिले सम्म आफ्नै तालले डम्फु बजाउदै जाने ?
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : उपलब्धि के ?
के प्रवासमा नेपाली संघसस्था आवश्यक छन् ?
नारायण अधिकारी काठमाडौं, माघ ८– चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा गोविन्द केसी १६औं अनसन बस्न इलाम पुगे। पुस २५ देखि उनले आमरण अनसन थाले। त्यसको दुई दिनपछि एक युवकले पनि इलाम चोक बजारको लाकुरी चौतारामा अनसन थाले। उनको अनसनको उद्देश्य भने डा केसीको भन्दा भिन्न छ। डा केसीका मागसँग...
दलितभित्रै चरम जातीय विभेद : जातैपिच्छे कुवा